February 11, 2018 adminLeaveaComment on ‘यौनसम्पर्क गर्दा केटि को इच्छा लिङ्ग भन्दा पनि यि कुराहरुमा बढी हुन्छ जानीराख्नुस पुरा पढ्नुस
काठमाडौं,अचम्मका हुन्छन् । कसैलाई के मन पर्ने, कसैले कस्तो चाहने । यसै बिषयमा एउटा अनौठो र नयाँ सर्वेक्षण भएको छ । बेलायतका मानिसहरूको यौन चाहाना बारेमा समय समयमा बिभिन्न सर्वेक्षणहरू भइरहन्छन । अहिले भर्खरै भएको एक सर्वेक्षणमा बेलायतका ५० प्रतिशत भन्दा बढी महिलाहरू यौनका समय पुरा नग्न हुन चाहाँदैनन ।
यस सर्वेक्षणमाबाट ५० प्रतिशत भन्दा बढी महिलाहरूलार्इ यौनका समय कुनै न कुनै कपडा लगाउनु नै पर्ने तथ्य फेला परेको छ । अझ ५४ प्रतिशत महिलाहरूका अनुसार कुनै कपडाले उनीहरूको शरिर लुक्ने भएबाट उनीहरूमा रहेको आत्मविश्वास बढ्ने गर्दछ । उता ३६ प्रतिशत पुरूषहरूले मात्र महिलाहरूले यौनका समय केही लगाएको मन पराउने गर्दछ ।
महिलाहरूका अनुसार उनीहरूले यौनका समय केही बेर्ने कपडा वा ब्रा लगाएर यौन गर्ने गर्दछन् । यस सर्वेक्षणमा ६१ प्रतिशत महिलाहरू अध्यारोमा यौन गर्न मनपराउने तथा ३७ प्रतिशत उज्यालोमा यौन गर्न मन पराउने तथ्य फेला परेको छ । यसबाट जती बिकसित भएपनि बेलायती महिलाहरू यौनका बारेमा भने कतै न कतै रूढीबाढी नै देखिएको छ ।
धेरैसँग शारीरिक सम्पर्क राख्दा के-के हुन्छ ? महिला पुरुषले जान्नैपर्नै
एजेन्सी । पछिल्लो समय यौनजीवनका बारेमा थुप्रै अध्ययन र अनुसन्धान भएका छन् । भर्खरै मात्र एउटा अनुसन्धान भएको छ, जो सबै मानवका लागि महत्वपूर्ण छ । विट्रिस सोधकर्ताले गरेको अध्ययनमा एकै व्यक्तिले धेरै मानिससँग यौन सम्पर्क गर्दा हुने फाइदा र बेफाइदा तथा फरकबारे प्रतिवेदन तयार पारेको छ । उक्त प्रतिवेदनमा धेरै व्यक्तिसँग शारीरिक सम्पर्क राख्दा विभिन्न रोग लाग्ने कुरा र त्यसबाट बच्ने उपायबारेमा जानकारी दिएको छ । उसो त सुरक्षित तरिकाबाट जतिसँग शारीरिक सम्पर्क राखेपनि कुनै फरक नपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । भगक्षेत्र : पुरुषको तुलनामा महिलाको यौनअङ्ग बाहिरबाट हेर्दा त्यति स्पष्ट देखिँदैन । झट्ट हेर्दा छालाको दुई पत्र एक–अर्कामा टाँसिएको जस्तो मात्र देखिन्छ । यसैलाई हामी समग्रमा भग भन्छौं । यही भगको माथिपट्टि बोसोयुक्त तन्तुले बनेको केही उठेको भागलाई (mons pubis) भनिन्छ ।
भग क्षेत्रमा भएका छालाको पत्रलाई फर्कायौं भने भित्रतिर ठूलो र सानो भगोष्ठ, भगाङ्कुर तथा योनिद्वार जस्ता विभिन्न अङ्ग देख्न सकिन्छ । भगोष्ठ : यो भगक्षेत्रको सबैभन्दा बाहिरी भाग हो । यसको दायाँ र बायाँतर्फ बोसोयुक्त तन्तुले बनेका दुई पत्र हुन्छन् । हामीले यी ठूला भगोष्ठलाई बाहिर फर्कायौं भने दुवैतिर एक–एक साना भगोष्ठ देख्न सक्छौं । यही साना भगोष्ठले भित्री भगक्षेत्रलाई छोपेर राखेको हुन्छ । यी ठूला तथा साना भगोष्ठको छेउ माथि र तलतिर एक–अर्कासँग जोडिएको हुन्छ । यी भगोष्ठको आकृति र नाप व्यक्तिअनुसार फरक हुन्छ ।
भंगाकुर : यो महिला शरीरमा भएको महत्वपूर्ण यौनअङ्ग हो । यो भगक्षेत्रको माथिल्लो भागतिर हुन्छ जहाँ भगोष्ठ दुवैतिरबाट एक-आपसमा जोडिन्छन् । यसको काम भनेकै महिलालाई यौन सुख दिनु हो । भगाङ्कुरको टुप्पोलाई अंग्रेजीमा नबिलक भनिन्छ । व्यक्तिअनुसार यसको आकार फरक भए पनि सामान्यत: यो केराउको दानाजत्रो हुन्छ । यसको कजबात शरीरसँग जोडिएको हुन्छ । भगाङ्कुर लामो–छोटो हुनुमा कजबात को विशेष भूमिका हुन्छ । निकै सानो भए पनि यो पुरुषको लिङ्गजस्तै उत्तेजित हुन्छ ।
योनि : भगक्षेत्रमा दुईवटा द्वार हुन्छन् । त्यसमध्ये पिसाब आउने द्वारलाई मूत्रद्वार भनिन्छ भने त्यसको ठीक तल रहेको अर्को द्वारलाई योनिद्वार भनिन्छ । योनिद्वार भगक्षेत्रको बीचतिर हुन्छ । यो मांसपेशीले बनेको एकदमै लचिलो यस्तै ३–४ इन्च लामो मार्ग हो । सामान्य अवस्थामा यसका भित्ताहरू एक–अर्कासँग टाँसिएको अवस्थामा हुन्छ, तैपनि योनिको लम्बाइ र चौडाइ व्यक्तिपिच्छे फरक–फरक हुन्छ । योनिद्वारको गोलाइ पनि फरक–फरक हुन्छ ।
योनिच्छद : योनिद्वारको ठीक भित्रपट्टि हुने गुजमुज्ज परेको पातलो छालाको पत्र वा झिल्लीलाई योनिच्छद भनिन्छ । यौनसम्पर्कका बेला झिल्लीको आफ्नै कुनै निश्चित भूमिका हुँदैन, तर यसले महिनावारी हुँदा निस्कने रगतका लागि बाटो बनाइदिन्छ । धेरैजसो महिलामा यो झिल्ली योनिद्वारको भित्तावाट अलिकति मात्र बाहिर निस्किएको हुन्छ, अर्थात् यसले योनिद्वारलाई पूरै ढाकेको हुँदैन । यस्तै १० हजार महिलामध्ये एक जना यो झिल्ली नभएकै अवस्थामा जन्मन्छन् । योनिच्छदको आकार, बनावट तथा मोटाई व्यक्तिअनुसार फरक–फरक हुन्छ । योनिद्वारको वरिपरी घेरा हालेजस्तो भए त्यसलाई (annular) योनिच्छद भनिन्छ भने झिल्लीको विचमा पट्टीजस्तो भए त्यसलाई septate योनिच्छद भनिन्छ ।
कुनै योनिच्छद चाल्नीजस्तै प्वालैप्वाल परेका पनि हुन्छन् जसलाई (cribriform) योनिच्छद भनिन्छ । शिशु जन्माइसकेका महिलाहरूमा भने यसको केही अंशमा घेरा भएको पाइन्छ, जसलाई उबचयगक योनिच्छद भनिन्छ । विरलै स्थितिमा योनिच्छदमा प्वाल नै नहुन सक्छ, यस्तो स्थितिमा सजिलै उपचार गर्न सकिन्छ । स्तन : व्यक्तिअनुसार स्तनको आकार तथा नापमा धेरै भिन्नता पाइन्छ । कुनै साना हुन्छन् भने कुनै ठूला, त्यसैगरी स्तनको आकृति पनि कुनै गोलाकार, कुनै अलि चुच्चो परेको हुन्छ भने कुनै झोल्लिएको सम्म हुन्छ ।
गर्भावस्था र स्तनपान गराइरहेको अवस्थामा स्तन केही ठूलो हुन्छ । स्तनको विकासका क्रममा यसको आकार र कडापनमा पनि परिवर्तन हुन्छ । स्तनको आकृति तथा नाप अनुसार थुनचोली बन्ने गरेका छन् । स्तन तथा थुन चोलीका आकारलाई आधार मान्ने हो भने (A, B, C, D वा DD) (Double D वा E) आकारका (cup size) भएका भनेर वर्गीकरण गरिएको पाइन्छ । अन्तमा, तपाईंले धेरै जनासँग वा एकै व्यक्तिसँग धेरै यौनसम्पर्क राखेको कुरा योनिच्छद, योनि वा स्तनबाट पत्ता लाग्छ भन्ने कुरा सोच्नुभएको हो भने त्यो पूर्णत: गलत हो । सुरक्षित तरिकाबाट शारीरिक सम्पर्क राख्दा कुनै पनि रोग लाग्दैन् । तर, सावधानी नअपनाइए भयानक यौनरोग र निको नहुने एचआईभी, एड्स समेत लाग्न सक्ने बताइएको छ । त्यसबाट बच्न परिवार नियोजनका साधनहरु प्रयोग गर्ने, पार्टनरसँग पूर्ण विश्वासमा सम्पर्क राख्नुपर्ने कुरा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कलेजोमा बोसो जमेको छ ? यसरी छुटकारा पाउनुहोस्
एजेन्सी। शारीरिक परीक्षण गर्ने हो भने धेरैले थाहा पाउँछन्, आफ्नो कलेजोमा बासो जमेको । किनभने यसको तत्काल कुनै शारीरिक प्रतिक्रिया नदेखिने भएकाले कलेजोमा बोसो जमेको कुरा धेरैले भेउ नै पाउँदैनन् । हुन त कलेजोमा सामन्य बोसो लाग्नु ठूलो कुरा होइन । तर, बोसोको मात्रा १० प्रतिशतभन्दा बढी छ भने त्यसले समस्या निम्त्याउँछ । कलेजो हाम्रो शरीरको महत्वपूर्ण अंग हो । तर, बद्लिदो जीवनशैलीको कारण अहिले कलेजोको समस्या साझा पीडा बन्दै गएको छ ।
फ्याटी लिभर के हो ?
यो त्यही अवस्था हो, जब कलेजोमा बोसो जम्न थाल्छ । कलेजोमा अधिक बोसो जमेर हुने संक्रमणलाई फ्याटी लिभर भनिन्छ । वोसोयुक्त खानेकुराको सेवन, मोटोपन, अनियमित दिनचर्या, तनाव, रक्सीको सेवन, धुमपान जस्ता कारणले कलेजोमा बोसो जम्छ । यस्तो रोगले धेरैलाई सताएको हुन्छ । जब, कलेजोमा समस्या हुन्छ, शरीरका अन्य अंगहरुमा पनि त्यसको असर पर्छ ।
– भोक कम लाग्नु ।
यस कारण प्रियंका, स्वस्तिमा र एलिशाले सलमान खानसँग नाच्नु अस्विकार गरे
Shushant Kharti Best Dance Moment
December 12, 2017 January 14, 2018 admin